Rosia: Vaovao, “Lalànan’ny Iray Andro”, fangatahana hanivana ireo fanehoan-kevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2010 6:54 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Português, English
Raha ny marina dia fampidirana tetika fanasivanana diso tafahoatra ny fanapahan-kevitra [EN] iray noraisin'ny Fitsaràna Avo any Rosia tamin'ny 15 Jona izay “manafaka” ireo haino aman-jery mpampita vaovao amin'ny aterineto tsy ho tompon'andraikitra amin'ireo fanehoan-kevitra ataon'ireo mpamaky azy ireny. Roskomnadzor, sampan'asa fédéraly manara-maso ny aterineto sy ny fifandraisan'ny ‘mass media’ ao amin'ny Ministeran'ny Fifandraisandavitra Rosiana, dia nanolotra ny “lalànan'ny iray andro” izay milaza fa ny media amin'ny aterineto dia tsy maintsy mamafa na manitsy ireo hevitra “tsy mifanitsy” ao amin'ny vohikalan-dry zareo iray andro aorian'ny fampahafantarana azy ireo, raha tsy izany dia mety ho very ny fandraketana ny maha “mass media” azy ireo.
Ireo lohahevitra voarara dia voatanisa ao amin'ny Andininy faha-4 ao amin'ny lalàna “Ho an'ny Mass Media” [RUS]. Anisan'izany ireo fiantsiana fankahalàna, fampihorohoroana, ary herisetra, firesahana vetaveta, ary famborahana ireo tsiambaratelom-panjakàna.
Roskomnadzor dia nanome ny fampitandremana voalohany araka ny lalàna ho an'ilay vohikala Apn.ru tamin'ny alalan'ny mailaka ny 23 Jona, nefa tamin'izany dia tsy mbola nazava tsara ny fe-potoana tokony hamafàna haingana ilay fanehoan-kevitra, na hoe afaka alefa mailaka ny fangatahana ofisialy. Tamin'ny 6 Jolay dia namoaka [RUS] antontan-taratasy manoritsoritra ireo torolàlana ho an'ny fampahafantarana i Roskomnadzor nitondra ny lohateny lavabe hoe: “Fomba atao amin'ny Fampahafantarana ireo Haino aman-jery Mpampita Vaovao izay Miparitaka eny amin'ireo Tambazotram-pifandraisandavitra sy ny Aterineto noho ny Tsy fetezan'ny Fanararaotana ny Fahalalahan'ny Vaovaom-bahoaka” (lahatsoratra feno [RUS])
Sergey Sitnikov, talen'ny Roskomnadzor, dia nanazava [RUS] fa ny tanjon'ity sampan-draharaha ity dia ny “hisorohana ny fiparitahan'ny vaovao tsy manara-dalàna,” nefa maro ireo mpitoraka blaogy Rosiana no voaelingelin'izany hevitra izany, ary niady hevitra mafy momba izany tao amin'ny Habrahabr [RUS], vohikala mifandraika amin'ny informatika.
Ny sasany tamin'ireo mpitoraka blaogy niezaka ny nijery ny lafitsarany (tsy nisy vokany). Nanoratra [RUS] i StrangeAttractor :
Nanoratra [RUS] i Newpravda:
Amin'ny lafiny iray, hevitra tsara ihany izany, hazavaiko – tsy fanomezana an'ireo mpampihorohoro ny zo hiteny am-pahalalahana. Nefa raha ny zava-misy, izy ireo [Roskomnadzor] dia hampihatra izany [‘lalànan'ny iray andro’ izany] amin'izay tiany hampiharana azy, tsy ho gaga aho raha mandrara an'i Gena sy Cheburashka [EN] [mahery fo anatina sarimiaina malaza] amin'ny fanentanana momba ny zavatra iray ry zareo.
Voaresaka ihany koa ireo vokatra sy akony isan-karazany aterak'ilay lalàna. I Vitaliidaniuk dia naneho [RUS] ahiahy ny amin'ny tena fandairan'ireo antontan-taratasy, ary milaza fa ho sarotra tokoa ny hanara-maso ireo hevitra ao amin'ny Twitter avoaka matetika miaraka amin'ireo lahatsoratra na ireo rafitra fanehoan-kevitra ao anatiny (toa an-dry Disqus na IntenseDebate).
Nilaza [RUS] i Voldar fa azo atao ny mampiasa ilay Atidohamilim-panjakàna ho Fikarohana [EN] nandrasana hatramin'ny ela mba hitadiavana ireo fanehoan-kevitra tsy mendrika ary mandefa fampahafantarana any amin'ireo mpanoratra amin'ny fomba tsy baikoana [automaticaly] . Nanoratra [RUS] i XaosSintez momba ny fahafahan'ireo fampahafantarana hosoka avy amin'ny Roskomnadzor handrara karazan'adihevitra maro. Ary i xoco dia nizara [RUS] ny tantarany momba ny fomba fanaraha-maso sy fifehezan'ireo manampahefana ireo fanehoan-kevitra anaty aterineto na tsia:
Mampalahelo daholo izany. Amin'ny maha-mpandray anjara amin'ny famoronana ny iray amin'ireo vohikalam-piarahamonina any an-tanànan'i Lyubertsy [EN] (ambanivohitr'i Môsko), te-hizara ny tantarako aho. Ao amin'ny seha-piadian-kevitra izahay dia niresaka momba ireo làlana ratsy, ireo tranobe vaovao, ireo tsena be korontana. Noho izany dia nieritreritra ny hidina an-dàlam-be ireo mpampiasa ny seha-piadian-kevitra mba hisarihana ny saina amin'ireo lavaka lalina antsasa-metatra, ary niady hevitra raha tokony hibahana ny fifamoivoizana eny amin'ny arabe amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana ry zareo. Ny androtr'iny ihany dia nahazo hafatra avy amin'ireo manampahefana izahay, mitaky fanampim-baovao momba ireo mafana fo ao amin'ny seha-piadian-kevitra – adiresy IP, ora fidirany ao amin'ny seha-piadian-kevitra, sns. Toy ny hoe tafiditra any amin'ny raharaha “extremiste” ery ireny olona ireny. Inona no hiseho avy eo? Tsy misy soritra fahalalahana miteny mihitsy amin'izany.
Vokatry ny adihevitra, namorona tenifototra #ru_cenz ao amin'ny Twitter ireo mpitoraka blaogy hanarahana ireo tranga rehetra mifandraika amin'ireo fepetra fanafoanana vaovao sy ny sivana amin'ny RuNet amin'ny ankapobeny.
Ireo fepetra farany noraisin'ny Roskomnadzor dia tsy vitan'ny hoe mandika ny voalazan'ny Lalàmpanorenana Rosiana, izay mandràra ireo endrika sivana rehetra, fa toa manohitra ny hevitry [RUS] ny filoha Medvedev momba ity olana ity ihany koa. Ity tranga ity dia mampiseho toetra maro mampiavaka ny fitondràna politika ankehitriny: tsy fahampian'ny fanajàna ireo lalàna sy ireo zon'olombelona, fifanoheran'ny zavatra lazaina sy izay tanterahina, ary farany, finiavana mazava hanohina sy hifehy ny RuNet.